I-DMX ekhokele ukukhanya kwesibane
I-DMX ikhokelele iityhubhu ze-3D
Ukukhanya kwe-pixel ekhokelwe yi-DMX
Zeziphi izizathu zokuba kutheni imithombo yokukhanya ekhokelwayo ithandwa?
Iimpawu zokukhanya komthombo wokukhanya kwe-LED: 1. Ukusebenza: Zombini indawo zokukhanya ze-LED kunye nesikrini sokubonisa i-LED sinokulawulwa yikhompyuter ukuhambisa ulwazi lwentengiso ngexesha lokwenyani, ukusasaza ividiyo yentengiso, kunye nokutshintsha umxholo wentengiso ngokuthanda. Umboniso we-LED une-hig ...
Zenza ntoni izibane zomgama kunye neetyhubhu zokugcina izinto ezifanayo?
Okokuqala, ukusasaza ubushushu, enyanisweni, baninzi abantu abangakuqondiyo ukutshabalalisa ubushushu kwizibane nezibane. Abantu abaninzi bachukumisa iqokobhe. Ke nokuba iqokobhe lishushu okanye akunjalo, ewe, akukho namnye kubo onempendulo efanelekileyo. Impendulo yokugqibela nokuba kushushu okanye akunjalo kukubona i ...
Zithini iimeko zesicelo sezibane zezikhukula ze-LED?
Sinokubiza ukukhanya kwe-LED okanye ukukhanya kwe-LED. Izibane zezikhukula ze-LED zilawulwa yi-chip eyakhelweyo. Ngoku zimbini iintlobo zeemveliso onokukhetha kuzo. Inye kukudityaniswa kweetshipsi zamandla, kwaye Olunye uhlobo lusebenzisa chip enye yamandla aphezulu. Xa kuthelekiswa phakathi kwaba babini, eyokuqala izinze ngakumbi ...
Lunjani ulondolozo lwemihla ngemihla yezikhanyiso ze-LED?
Ngapha koko, izibane zezitalato ze-LED, ayikuko ukuba sizifakile, kwaye akukho mfuneko yokuzilawula. Ukugcinwa kunye nokugcinwa rhoqo kunokuqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide. Ukukhanya kwezikhukhula ze-LED, coca izibane ngexesha lokusetyenziswa kwangaphandle. Owona msebenzi uphambili kukujongana nothuli olungaphezulu. Kwi ...
Kutheni le nto ukukhanya kwegama elikhokelweyo kufuneka liqwalasele ukusebenza komthombo wokukhanya?
Eyona njongo iphambili yezikhanyisi zemigca ekhokelwayo kukutshintsha umfanekiso wasebusuku wehotele, ukuze isakhiwo siphinde sakhiwe kwakhona ebusuku, sibonakalise umtsalane kunye neempawu ezingenakubonakaliswa emini, ukuze kutsalwe abathengi abaninzi. 1, ukusebenza ngokukuko Nika ingqalelo kwizixhobo ...
Njani malunga nokuguquguquka kwezibane ze-LED?
Isibane somda we-LED sisidonga se-aluminium eludongeni lweewallow. Isiciko sokugqibela kunye nesincinci sokugqibela kunye nesibiyeli esonyukayo senziwe ngealuminium ingxubevange yoxinzelelo oluphezulu lokufa-ukuphosa iringi ephezulu enganyangekiyo yeringi yeringi yokutywina, engenawo manzi nethembekileyo. Izibane zinokuba ...
Loluphi uhlobo lokukhanya ngumthombo wokukhanya kwe-LED?
Umthombo wokukhanya kwe-LED yindawo entsha yokukhanya okuhombisayo, esisongezelelo kumthombo wokukhanya okukhanyayo kunye nokukhanya kwezikhukula. Izibane ze-Smart ezinokuthi zithathe indawo yenkcazo ethile yezikrini zokubonisa ezifezekisa amachaphaza kunye nomphezulu ngokuxuba umbala wepikseli. Umthombo wokukhanya kwenqaku le-LED ngu ...
Nguwuphi umgaqo wobuchwephesha be-wall wall washer?
Kwiminyaka yakutshanje, iwashi yodonga lwe-LED ibisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo, njengokukhanyiswa kodonga lwenkampani kunye nezakhiwo ezihlanganisiweyo, ukukhanyiswa kwezakhiwo zikarhulumente, izibane zodonga lwezakhiwo zembali, iindawo zokuzonwabisa, njl .; Uluhlu olubandakanyekayo luyanda ngokubanzi. Isuka e...
Luluphi utshintsho oluziswe kukukhanya kwezakhiwo zangaphandle esixekweni?
Yintoni iprojekthi yokukhanyisa izakhiwo? Loluphi utshintsho oluye lwaziswa kukukhanya kwesakhiwo kuthi? Esixekweni apho abantu bahlala khona, batye, baphile, kwaye bahambe, isakhiwo sinokuthiwa ngamathambo omntu kunye nobusuku obunegazi esixekweni, sixhasa ukusebenza kwesixeko kunye nophuhliso. Njengoko pa isitshixo ...
Ngaba imbangi yeemveliso zokukhanya kwe-LED-ukusasaza ubushushu?
Kwiminyaka yakutshanje, ngenkqubela phambili ngokukhawuleza yetekhnoloji ye-chip ye-LED, ukusetyenziswa kwezorhwebo kwee-LED sele kukhule kakhulu. Iimveliso ze-LED zaziwa ngokuba "yimithombo yokukhanya eluhlaza" ngenxa yesayizi yazo encinci, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ubomi obude benkonzo, ukukhanya okuphezulu, ukhuselo lokusingqongileyo ...
Inkcazo ebanzi yezalathi ezilishumi eziphezulu zomgangatho wokukhanya kwe-LED?
Umgangatho wokukhanyisa ubhekisa ekubeni umthombo wokukhanyisa uyahlangabezana nezalathi zokukhanyisa ezinje ngomsebenzi obonakalayo, intuthuzelo ebonakalayo, ukhuseleko kunye nobuhle obubonakalayo. Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwezalathi zomgangatho wokukhanyisa kuya kuzisa amava amatsha kwindawo yakho yokukhanyisa, ngakumbi kwisibane se-LED ...
Indawo okuyo ngoku: Isibane iAustech> IZiko leendaba> Luhlobo luni lokukhanya ongumthombo wokukhanya kwe-LED? Loluphi uhlobo lokukhanya ngumthombo wokukhanya kwe-LED? Umthombo wokukhanya kwe-LED luhlobo olutsha lwesibane sokuhombisa, esisincedisi kumthombo wokukhanya okukhanyayo kunye nokukhanya kwezikhukula. Izibane ezikrelekrele ezinokuthi ...
Izibane ze-Dj, Ukukhanya kwePixel, Ukwakhiwa kweLed Lighting, Ukukhanya kweStage, Izibane zeLed Facade Led, 3d Led Iityhubhu,
Zeziphi izizathu zokuba kukhokelwe kukukhanya kwenqaku ...
Yintoni ukukhanya kwezibane kunye ne-guardrail ...
Zithini iimeko zesicelo se-LED ...
Kunjani ukugcinwa kwemihla ngemihla kwezikhukula ze-LED ...
Kutheni le nto ilayini ekhokelwayo yokukhanyisa ihlawula uphawu ...
Lwedilesi: B isakhiwo, Chuangjian mveliso park, Shiyan, Bao'an, Shenzhen China